‘परिवारको अवस्था हेरेँ अनि हिँडे’ न त खेलकुदमा लागेकोमा पश्चाताप छ, न त खेलकुद छाडेकोमा नै। खेलकुदमा लाग्दा पनि घरबाट भागेरै खेल्न हिँडेकी हुन्। खेलकुद छाडेर हिँड्दा... सोमबार, साउन २६, २०७७
नहराउने सम्झना : जित्दा जित्दै चुकेका दिवस स्वर्ण पदकको लागि खेल्न रिङमा जाँदै गर्दा दिवस श्रेष्ठलाई हारको चिन्ता थिएन। उनको दिमागमा एउटै कुरा खेलिरहेको थियो- स्वर्ण पदक। विजय... शुक्रबार, साउन २, २०७७
जसलाई आफैंले जितेको १५ स्वर्णले गिज्याइरहन्छ खेलाडीको सफलता र असफलता मापन हुने जति पनि आधारहरु छन् ती सबैमा राजु राई उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। राजुको खेल र उनले पाएका उपलब्धीहरु लोभ... बिहीबार, असार १८, २०७७
अनि तोडियो भारतको रवाफ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने धोकोसँगै २०६८ सालमा पुलिसमा पुगिन्। सबैमा पास तर हाइटमा फेल भएर घर फर्किंदाको दुःखले मनमायालाई लामो सयम... सोमबार, असार १५, २०७७
कहिलेदेखि सुरु हुन्छ खेलकुद? नेपालमा भने चैतदेखि कुनै पनि रोकिएका खेलकुदका अभ्यास भएको छैन। प्रतियोगिता त परैको कुरा। त्यसै पनि सुस्त सरकार झनै सधैँ छायामा परेको... बुधबार, असार १०, २०७७
सर्वोच्चको फैसलापछि सन्दीप राई भन्छन्- फिफामा लड्न बाटो खुल्यो २०७२ साल असोजमा खेल मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) को आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीप राईले अब अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) मा लड्ने बाटो... मंगलबार, असार २, २०७७
विवादित एन्फाको भागबन्डा खेल अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आपतकालिन कार्यसमितिको बैठक आज बस्दै छ। गुट उपगुट बनेको एन्फा पदीय स्वार्थमै केन्द्रित भएको पछिल्लो ग... मंगलबार, असार २, २०७७
समस्यामा नेपालमा रहेका विदेशी खेलाडी : खै निगरानी? सन् २००५ मा ब्वाइज युनियन क्लबमा केही अफ्रिकन खेलाडी देखिएपछि आउँदो वर्षबाट अरु क्लबमा पनि अफ्रिकन खेलाडी राख्ने प्रचलन बढ्न थालेको... मंगलबार, वैशाख १६, २०७७